ဂျူပီတာတွင် လမည်မျှရှိသည်- လက္ခဏာများနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 23/06/2022 10:00 | နက္ခတ္တဗေဒ
ဂျူပီတာသည် နေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတွင် အကြီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ဂြိုလ်များအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ယခုအချိန်အထိ လပေါင်းများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ကြီးမားသောဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူအများက အံ့သြကြသည်။ ကြာသပတေးဂြိုဟ်တွင် လမည်မျှရှိသည်။. ၎င်းတွင်၎င်းတို့အမြောက်အများရှိပြီး၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ထင်ရှားသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆောင်းပါးတွင် ဂျူပီတာတွင် လမည်မျှရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် စပ်စုပုံအချို့ကို ပြောပြပါမည်။
1 ဂျူပီတာတွင် လမည်မျှရှိသနည်း။
2 ဂျူပီတာ၏ အခြားလများ
2020 ခုနှစ်အတွင်း မကြာသေးမီက သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ဂျူပီတာဂြိုဟ်ကို လှည့်ပတ်နေသည့် လ သို့မဟုတ် သဘာဝလ စုစုပေါင်း ၇၉ လုံးကို ရေတွက်ခဲ့သည်။. 2021 ရာစုကတည်းက လသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့် အဆိုပါအရေအတွက်သည် 2020 ခုနှစ်တွင် တိုးလာမည်ဟု ပညာရှင်များက မျှော်လင့်ထားသည်။ 600 ခုနှစ်ကတည်းက ဂျူပီတာတွင် လမည်မျှရှိသည်ကို သိလိုပါက Edward Ashton et al မှ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဂျူပီတာ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော လများ 1 XNUMX ကီလိုမီတာ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားသည်ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။
ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏လများအကြား၊ ဂါလိလဲလများသည် ထင်ရှားသည်။ ဂယ်လီလီယို ဂါလီလီ (Galileo Galilei) က နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အကြီးဆုံးလများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသော လုံးပတ်ချာလပတ် (၄)လုံးကို4ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နဂိုက၊ ဂယ်လီလီယိုသည် ၎င်းတို့အား ဂျူပီတာ ၁၊ ဂျူပီတာ ၂၊ ဂျူပီတာ ၃ နှင့် ဂျူပီတာ ၄ တို့ကို ဂြိုလ်များနှင့် အကွာအဝေးအလိုက် အမည်ပေးထားသည်။ (အတွင်းဆုံးမှ အပြင်ဆုံး)။ သို့သော်၊ Simon Marius သည် ဂျူပီတာ၏လများအတွက် နောက်ပိုင်းတွင် Io၊ Europa၊ Ganymede နှင့် Callisto တို့၏အမည်များဖြင့် လူသိများလာခဲ့သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဤ Galilean လများသည် ပုံမှန်လများဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်မဟုတ်သောလများအဖြစ် ဖမ်းယူခြင်းထက် ဂြိုလ်များပတ်လမ်းကြောင်းတွင် တည်ရှိနေပါသည်။
ဂျူပီတာ 1 ဟုလည်းသိကြသော Io သည် ဂယ်လီလီယို၏လ4ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ၏လထက်ပိုမိုကြီးမားသောဂျူပီတာ (အတွင်းဆုံးလ) နှင့်တတိယအကြီးဆုံးနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အချင်း 3.643 ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး 1,77 ရက်အတွင်း 421.800 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင် ဂျူပီတာအား လှည့်ပတ်သည်။ ဤလတွင် ထူးခြားချက်များစွာရှိသည်။
ပထမဦးစွာ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လှုပ်ရှားနေသော မီးတောင်ပေါင်း 400 ကျော်ရှိပြီး ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ တကယ်တော့ နေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘာအကြောင်းလဲ။ အဓိကအားဖြင့် ဂျူပီတာနှင့် အခြားပိုကြီးသော လများအကြား ဆွဲဆောင်မှုမှ ဖန်တီးထားသော ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဒီလှိုင်း အပူကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရလဒ်မှာ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မမြင်နိုင်သော မီးတောင်များ မရှိဘဲ ကီလိုမီတာ 500 ကျော်အထိ အမြင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သော မီးတောင် မီးတောင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ပတ်လမ်း ၎င်းကို ဂျူပီတာ၏ သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် ဂါလီလီယံလများ ယူရိုပါနှင့် ဂန်းမဒီနှင့် အိုင်အိုတို့၏ အနီးနားတွင် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၎င်း၏လေထုတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO2) ပါဝင်သည်။
၎င်းသည် နေအဖွဲ့အစည်းရှိ အခြားအရာများထက် သိပ်သည်းဆ မြင့်မားသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ အခြားလများထက် ရေမော်လီကျူးများ နည်းပါးသည်။
Europa (သို့) Jupiter II သည် အသေးဆုံး Galilean လဖြစ်ပြီး အချင်း 3.122 ကီလိုမီတာရှိသော်လည်း ဂျူပီတာ၏ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတာလဲ။ အထူ 100 ကီလိုမီတာ ထူထပ်သော ရေခဲများ တောက်ပနေသော မျက်နှာပြင်အောက် တွင် နီကယ်နှင့် သံတို့ ပေါင်းစပ်ထားသော အက်တမ် နျူကလိယ မှ ထုတ်လွှတ်သော အပူကြောင့် လသည် အထူး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည် ဟု သိပ္ပံပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်း က ကာလကြာရှည် တွေးထင် ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သောဘဝ။ NASA က 2016 ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေမပြသေးသော်လည်း၊ ဂြိုလ်တုများပေါ်တွင် ရေနေသတ္တဝါများ ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
Europa နှင့် ပတ်သက်၍ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ လသည် ပတ်လမ်းအချင်းဝက် 671.100 ကီလိုမီတာရှိသော လသည် 3,5 ရက်အတွင်း ဂျူပီတာသို့ လမ်းကြောင်းအားလုံးကို ပြန်ရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ 100 မီတာကျော်မှာ ဘူမိဗေဒ မတော်တဆမှု က သူ့ရဲ့ အပေါ်ယံ ဘူမိဗေဒ ဟာ ငယ်ရွယ်ကြောင်း ပြသနေပါတယ်။ ၎င်းအပြင် ၎င်း၏လေထုသည် အောက်ဆီဂျင်၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိထားရန် အရေးကြီးပြီး ရေခိုးရေငွေ့သည် အေးခဲနေသော မျက်နှာပြင်နှင့် အလင်း၏ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
ဂယ်လီလီယိုသည် ၎င်းအား Ganymede သို့မဟုတ် Jupiter3ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် ဂယ်လီလီယို၏ အကြီးဆုံးလဖြစ်သည်။ အချင်း 5.262 ကီလိုမီတာရှိသော Ganymede သည် နေနှင့်အနီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည့် Mercury အရွယ်အစားထက်ကျော်လွန်ပြီး ဂျူပီတာအား ခုနစ်ရက်အတွင်း ကီလိုမီတာ 1.070.400 ပတ်လမ်းကြောင်းကို ပြီးမြောက်စေသည်။
ဤဂြိုလ်တုသည် ၎င်း၏ထူးခြားသောဆွဲဆောင်မှုကိုပေးသည့် အခြားဂြိုလ်တုများနှင့် ခြားနားစေသည့် အင်္ဂါရပ်များစွာ ပါရှိသည်။
တဖကျတှငျ ဆီလီကိတ်ရေခဲလတွင် သံရည်၏အူတိုင်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိရေထက် ကျော်လွန်နိုင်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ယုံကြည်ကြသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းတွင် ၎င်း၏ အရည် core တွင် convection ကြောင့်ဟုယူဆရသည့် အခြားသူများနှင့်မတူဘဲ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်စက်ကွင်းရှိသည်။
အကြီးဆုံးဖြစ်သလို၊ အတောက်ပဆုံး Galilean လလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Callisto သို့မဟုတ် Jupiter IV သည် သိပ်သည်းမှုနည်းသော်လည်း ကြီးမားသောဂြိုဟ်တုလည်းဖြစ်သည်။ အချင်း 4.821 ကီလိုမီတာရှိပြီး ဂျူပီတာမှ 1.882.700 ရက်အတွင်း 17 ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးကို လည်ပတ်နေပါတယ်။ ဤလသည် ဂျူပီတာ၏ သံလိုက်စက်ကွင်းကြောင့် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အချက် လေးချက်အနက်မှ အပြင်ဘက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဘူမိဗေဒအရပြောရလျှင် ၎င်းသည် ရှေးအကျဆုံး မျက်နှာပြင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တို့ ပေါင်းစပ်ထားသော ပါးလွှာသော လေထုတစ်ခုအတွက် ထင်ရှားသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ Callisto သည် ၎င်းအတွင်းရှိ အရည်များ၏ မြေအောက်သမုဒ္ဒရာကို ခိုအောင်းနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
ဂျူပီတာ၏ လ ၇၉ လုံးတွင် ၈ လုံးသာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ပြပြီးသား Galilean ဂြိုလ်တု (၄) ခုအပြင် ပုံမှန် ကြယ်စုတန်းတွင် ပါဝင်သော Amalthea ဂြိုလ်တု (Thebe, Amalthea, Adrastea and Metis) ဂြိုဟ်တု (၄) လုံး ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင် တူညီသောအချက်မှာ ၎င်းတို့သည် ဂျူပီတာနှင့် အနီးဆုံးလများဖြစ်ပြီး တူညီသောဦးတည်ချက်ဖြင့် လှည့်ကာ ပတ်လမ်းကြောင်းနိမ့်ကျသော တိမ်းစောင်းမှုရှိသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော လများ၏ ပတ်လမ်းများသည် ဘဲဥပုံပုံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာနှင့် အလွန်ဝေးသည်။ ဂျူပီတာ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော လများထဲတွင် ဟိမဝန္တာအုပ်စု၊ Themisto၊ Carpo နှင့် Valetudo တို့ဖြစ်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း ဂျူပီတာတွင် လမည်မျှရှိသည်နှင့် ၎င်းတို့တစ်ခုစီ၏ အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤမျှကြီးမားသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အများအပြား လက်ခံထားနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များစွာသည် ၎င်းတို့အတွင်း၌ သက်ရှိများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြသည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့် ဂျူပီတာတွင် လမည်မျှရှိသည်နှင့် ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » ဂျူပီတာတွင် လမည်မျှရှိသနည်း။
မှိုနှင့် ချော်ရည်ကြား ကွာခြားချက်များ